Ungabhekana kanjani nesiqhwaga?
Akulula ukubhekana ngqo nesiqhwaga. Kumele uhlakaniphe futhi ukwazi ukuqinisela. Kuzofanele uzame amaqhinga ambalwa ukuze ukwazi ukubona ukuthi yimaphi asebenza kangcono.
Tshela umuntu omdala omethembayo ngokuchukuluzwa yisiqhwaga. Uma ungatsheli muntu omdala ukuze uthole usizo, ukuchukuluzwa yisiqhwaga kungaqhubeka. Abantu abadala bayakwazi ukuthola izindlela ezingakusiza ngaphandle kokuthi isiqhwaga sithole ukuthi khona umuntu omtshelile ngalokhu ezikwenza kuwena.
Suka eduze kwazo
Iziqhwaga zifuna ukukwesabisa. Kungenzeka ukuthi ngaphakathi unokwesaba kodwa zama ukushaya sengathi awunandaba. Zama ukungakhali ngisho ngabe kuthiwa wesaba kangakanani. Ungadinwa futhi ungazami ukuzilwela. Phefumulela phezulu uzame ukungatatazeli. Hamba usishiye ushaye sengathi awunandaba. Uma sibona sengathi awusasabi, ngeke zisakuthokozela ukukuchukuluza.
Susa lento eziyifunayo
Ngabe zithatha imali yakho, ukudla kwakho noma ucingo lwakho? Zama ukushiya lezo zinto ekhaya ukuze zingabi nasizathu sokusukela wena.
Hlala useduze nabangani bakho, uzame ukuba iziqhwaga singakutholi uwedwa. Iziqhwaga ziyazifihla izenzo zazo. Ukuchukuluzwa yisiqhwaga kwenzeka uma uwedwa abanye bengaboni, njengasendlini yangasese noma endleleni ebuya esikoleni.
Uma uhluleka ukuzigwema iziqhwaga kodwa ube ulimala, zivikele ngokuba ukwazi ukuzibalekela masisha.
Qhubeka nokutshela abanye
Qhubeka nokutshela umuntu omdala omethembayo ngaso sonke isikhathi uma kwenzeka lokhu kuchukuluzwa kuze kuphele. Ungayeki, kuze kube khona okusizayo!